Misokatra ho an'ny mpandeha iraisampirenena ny Repoblikan'i Kongo
Home » Toerana fitsangatsanganana » Misokatra ho an'ny mpandeha iraisampirenena ny Repoblikan'i Kongo
Misokatra indray ny Repoblikan'i Kongo
The Repoblikan'i Kongo dia nanokatra ny sisintaniny sy ny seranam-piaramanidina ho an'ny mpitsidika iraisam-pirenena. Mba hitsidihana an'i Kongo, ny mpitsangatsangana dia tsy maintsy manao fizahana ara-pahasalamana ary manaraka ny protokolan'ny quarantine.
Ny mpitsidika rehetra dia takiana amin'ny famitana lafy ratsy Covid-19 andrana ao anatin'ny 7 andro farafahakeliny alohan'ny hahatongavanao ary atolory ny valin'ny fitsapana nandritra ny 2 andro niaingana ho any Kongo.
Ny mpandeha rehetra tonga dia takiana amin'ny fizahana mari-pana amin'ny hafanan'ny vatana ary mety angatahina hanao fitsapana COVID-19 hafa.
Ny biraon'ny raharaham-bahiny, Commonwealth & Development (FCDO) any Angletera dia manome torohevitra ny amin'ny fitsangatsanganana rehetra ao anatin'ny 50 kilometatra miala ny sisintany miaraka amin'ny Repoblikan'i Afrika Afovoany ao amin'ny faritra Likouala. Manoro hevitra ihany koa ny FCDO fa tsy ny fitsangatsanganana tena ilaina any amin'ny distrikan'i Boko, Kindamba, Kinkala, Mayama ary Mindouli ao amin'ny faritry Pool, ary ny distrikan'i Mouyondzi any amin'ny faritra Bouenza.
Raha ny filazan'ny FCDO, ny mpitsangatsangana rehetra izay miditra amin'ny Repoblikan'i Kongo dia hapetraka ao amin'ny quarantine 14 andro ao amin'ny toeram-panjakan'ny governemanta.
Tsy misy fitakiana làlana sy soritry ny fahatongavana amin'izao fotoana izao. Rehefa lasa ireo mpandeha dia miala amin'ny Repoblikan'i Kôngô dia mety iharan'ny fizahana, anisan'izany ny fanamarinana ny mari-pana. Ny fepetra ara-pahasalamam-bahoaka sy ny fepetra takiana amin'ny fidirana dia mety hiova amin'ny fotoana fohy ary tokony harahi-maso amin'ny alàlan'ny fampahalalam-baovao eo an-toerana ho an'ny fivoarana farany.
Ny mpitsidika dia tsy maintsy mahazo visa alohan'ny dia, ary ny pasipaoro dia tokony ho manan-kery mandritra ny fotoana kasaina hijanonana. Tsy ilaina ny vanim-potoana fanampiny manan-kery ankoatr'izay. Ireo teratany Benin, Burkina Faso, Kamerona, Repoblikan'i Afrika afovoany, Chad, Cote d'Ivoire, Guinea ekoatorialy, Gabon, Mauritania, Morocco, Niger, Senegal ary Togo dia mety hahazo visa rehefa tonga. Ny teratany hafa rehetra dia tsy maintsy mangataka visa alohan'ny dia.
Ho an'ny visa mpizahatany, ny mpitsangatsangana dia mila mahazo taratasy fanasana avy any Kongo ary manonta ary maka izany miaraka amin'ny tapakila tapakilan'ny fiaramanidina mankany amin'ny Masoivohon'i Repoblikan'i Kongo akaiky indrindra, miaraka amina fotoana fanodinana 3 andro $ 100.
Hamarino raha ilaina ny taratasy fanamarinana tazo mavo alohan'ny fitsidihana.
Ny FCDO dia milaza fa ireo fampahalalana ireo dia manomboka hatramin'ny 14 septambra 2020.
Boeing sy Etihad Airways dia nampiakatra ny lasantsy fiaramanidina maharitra ho amin'ny ambaratonga manaraka